Ubuntu / Debian တွင် League of Legends ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည် (2018 Method) (Automatic) | Linux မှ
Ubuntu / Debian တွင် Legends of Legends ထည့်သွင်းနည်း (2018 Method) (Automatic)
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကမည်သို့မည်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ суперလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် League of Legends ကို Linux တွင် Wine, Winetricks နှင့် PlayOnLinux ကို install လုပ်ပါ, ယနေ့အထိဤနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အခက်အခဲမရှိဘဲဆက်လက်သုံးစွဲသော်လည်း၊ သုံးစွဲသူများစွာကသူတို့၏အထူးကိစ္စရပ်များတွင်ဤနည်းလမ်းသည်ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်းမလုပ်ဆောင်တော့ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားရေးသားထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို၍ တိုက်ရိုက်နှင့်အလိုအလျောက်နည်းလမ်းများကိုယူဆောင်လာသည်။ လုပ်နိုင်လားLeague of Legends ကို Ubuntu / Debian တွင် Install လုပ်ပါ.
League of Legends ကို Ubuntu / Debian တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ခြေလှမ်းများမှ League of Legends ကို Ubuntu / Debian တွင် install လုပ်ပါ ဒီနည်းလမ်းနဲ့သူတို့ဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဂိမ်းနှင့်၎င်းမှပြင်ဆင်ထားသောဝိုင်နမူနာပါသောဖိုင်ကိုသာ download လုပ်ပါ ဒီမှာ, ဒီဖိုင်သည် disk space 9.3 GB ခန့်ရှိသည်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြီနှင့်သင့် distro အတွက်သင့်လျော်သော installation .sh ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းကို install လုပ်သွားမည်။
Ubuntu အသုံးပြုသူများသည် installer မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည် ဒီမှာ နှင့်ဤသည်အခြားထံမှ Debian ၏ လင့်ခ်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင် execissions permissions များကိုပေးပြီး .sh ကို execute လုပ်ဖို့အဆင်ပြေသည်။ သင်လိုအပ်သော repositories ထည့်ရန်သင်၏ root password ကိုအရင်ထည့်ရမည်။ ထို့နောက်သင်လိုအပ်မည့် GAMES directory အပြင်သင်လိုအပ်သော package ကိုလက်ခံပါ။ LOL ကို run
ဇာတ်ညွှန်းသည်၎င်း၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များအားလုံးပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း desktop မှ LOL ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။
ဒီ LOL ကိုဒီနည်းလမ်းနဲ့အတူ install လုပ်ဖို့သင်ယူခဲ့တဲ့မူလဗီဒီယိုကတော့အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်လိုပါကဂိမ်းထဲဝင်သောအခါစာလုံးများပြသရာတွင်ပြhaveနာရှိသူများသည် lol ကို directx အသုံးပြုရန်အတင်းအကျပ်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ GAMES/LOL/LoL32/drive_c/Riot Games/League of Legends/Config/game.cfg မျဉ်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံ x3d_platform=1 အားဖြင့် x3d_platform=0, ငါတို့ကယ်တင်နှင့်ပျော်မွေ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Ubuntu / Debian တွင် Legends of Legends ထည့်သွင်းနည်း (2018 Method) (Automatic)
၎င်းကို torrent as အဖြစ်တင်သင့်သည်
Carlos Solano ဟုသူကပြောသည်
အဲ့တာမှန်တယ်! ၎င်းကိုတင်ရန်နှင့်သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်က၎င်းကိုဒေါင်းလုဒ် လုပ်၍ မရပါ။ ယခုတွင် Dropbox တွင်အများဆုံး download အရေအတွက်သည်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
Carlos Solano ကိုပြန်ပြောပါ
ဒေါင်းလုပ်ကန့်သတ်ချက်ကြောင့် Dropbox မှကူးယူ။ မရပါ ...
၎င်းတို့သည်ဖိုင်များကို Crapbox သို့အမှန်တကယ်တင်ရန်လိုအပ်ခဲ့သလား။ : S
ဖိုင်ကို download လုပ်၍ မရပါ
အခြား site တစ်ခုသို့ upload တင်၍ ၎င်းကို update ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
linkeee အသစ်တစ်ခုချန်ထားပါ !!!!
က Nicolas gonzalez ဟုသူကပြောသည်
Nicolas Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
Installer ဘယ်မှာရလဲ။ ပင်လယ်ဓားပြပင်လယ်အော်ထဲမှာ Flatpak ကိုသင်ရှာနေတယ်ဆိုရင်ဝိုင်နဲ့ဂိမ်းကစားသူတွေကအလိုအလျောက်တပ်ဆင်ထားတယ်။
ကျွန်ုပ်တွင်ထိုအရာကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းအမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်တို့သည် fps အလေးချိန်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တွင် GTX 1060 ရှိသည်
ဖိုင်ကို download လုပ်၍ မရပါ၊ ထို့ကြောင့်အသုံးမ ၀ င်ပါ
Darktable: ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းအသွားအလာ Tool တစ်ခု